Institution mpampindrana vola
Azafady mba manontany aminareo namana jiaby mpisera ato sao misy afaka manoro hevitra.
Izaho tovolahy vao 32 taona;miasa ara-dalana amin'ny societe zone franche;ka mba manana projet keliko izahay.Tsara ho marihina fa zaho dia tsy manana zavatra ho atao garant ankoatry ny salaire mensuel.Miangavy anareo namana sao mba misy institution mpampindram-bola ireny afaka mi-financier projet ko io.Misaotra betsaka sahady.
Re: Institution mpampindrana vola
Date: 04 janvier 2016 - 16:36
Misy mampita izany hono fa tsy dia fantatro na ny toerana misy azy aza.3% hono ny d'Intérêt isam-bolana.
Par: Diniho tsara
Date: 10 janvier 2016 - 22:03
Ny institutions de micro-finance dia feno ny tanàna. Azonao antonona tsirairay ireo ianao dia mampitaha. Diniho tsara anefa ny projet-nao raha hitondra vola haingana sao dia fietanam-po fotsiny no betsaka.
Ataovy ny kajy fa mety mihoatra ny 30% ny taux d'intérêt ao anatin'ny herin-taona ka sao ho bokan'ny trosa eo.
Date: 22 janvier 2016 - 14:49
Domicileo an'ny banky ny karamanao dia any @ banky maka prêt 17/18% eo isantaona ny intéret aza miditra microfinance ra tsy te ho borona tanteraka jereo @ zany fotsy oe 3% isambolana sad reo tmisy alaro fa tonga de maka etana raha vao tsy tonga ara-potoana ny remboursement
Date: 24 janvier 2016 - 15:09
Mba torohevitra kely fotsiny ny ahy eto: tena henjana be ny mamerina ny vola nidramina
amin'ireny micro-finance ireny. Mody hoe mora ahazoana vola fa lafo be ny zana-bola.
Maro no efa banky ropotra, fongana fananana sy nahazo aretim-po tamin'ireny ka mila mitandrina
sy manao kajy tsara aloha (rentabilite ) ary fifehezantena be ianao vao mety ho tafavoaka.
MPAMPANJANA-BOLA ara-dalana ireny no fijeriko azy ary tsy mifantafanta mihitsy maka
ny antoka rehefa taraiky ny fandoavanao ny volany.
Tsy honohono ny ahy fa ny masoko no nahita olona tsy nanana afatsy fandriana(berceau) sisa
fa lasa daholo ny entana..
saino ihany aloha e..
Date: 24 janvier 2016 - 15:19
Ny vaha-olana dia efa nisy nanoso-kevitra teo ambony teo ihany..
Azo heverina koa ny manangana societe kely na kaoperativa na SARLU fotsiny aza dia
amin'ny anaran'ireny no indramana vola hialana amin'ny fanaovana antoka ny fanananao
ao antrano..mila namana sy fahaizana mitantana kely aloha amin'izay e.
Date: 26 janvier 2016 - 07:45
Ny hitako aloha dia aleo lavitra mandeha banque primaire raha aharitra ny fananganana ilay projet.
Ny microfinance dia natao ho an'ny activité vetivety. Ohatra olona mividy balle de friperies iray, vao lafo iny dia mividy indray ka rehefa tapitra ny iray volana dia mamerim-bola izy dia mangataka indray raha mila. Izany hoe tena mihodina be ny vola nindraminy. @ farany tsy mila misambotra intsony ilay olona fa tafavoaka tsara, efa nahazo stand sns.
Date: 26 janvier 2016 - 09:44
Gravy ranga le microfinance fa tde tena fanambakana mihoampapana mitsy
indrindra fa le akisesy bq 2 andro izy de mivôka fa 36% be zao no taux izany hoe raha mindrana 5 000 000 Ar ianao de soloina 7 000 000 Ar ao anatin'ny 24 volana.
Date: 26 janvier 2016 - 10:54
Izay voalazanao izay indrindra.
Date: 20 juin 2016 - 11:36
aiza no tsy hanaovan'ny olona hafetsena izy ireny, hindramany vola betsabetsaka dia hanaovan'ny olona antoka cmion fa refa avy eo efa tsy mihetsika sy tsy misy hilàna azy intsony ny cam's ho alainy refa tsy mahaloa vola ilay mpindrana, sendra ny nahay azy tsara
Date: 10 août 2016 - 10:43
aza miditra am reny micro finance reny fa pangalatra ireny, ary za zao mihitsy no efa tratra, mody hoe afaka averina mitambatra aloha ny fotoana nifanarahana io rehefa mande tsara projet nao na dans trois mois aza nefa aveo tsy nanaiky mihitsy zareo raha tsy no payer-na par mois mandra pahatapitry ny 24mois le izy, aleo makany am banky sady tsy misy antoka fa salaire ihany no antoka
Date: 09 octobre 2016 - 22:16
Tena mangalatra be lay microfinance, mody hoe 3% isambolana ny alainy fa ref kotina isan taona dia mahatratra 35 à 40% ny tombony alainy.
Date: 29 décembre 2016 - 06:22
Ka zareo kosa aloha dia hampanjanabola no tanjona fa tsy hanao asa soa e. Efa au courant ianao manasonia contrat oe 2 à 3% par mois ny intéret fa rehefa kaontina dia mahazo be izy fa ianao mila vola ampiasaina dia maka ihany e.
Za zao efa imbetsaka nanao accès banque. Tena mora mahazo vola tokoa. In 4 aho zay no nindrana. Nahavonjy fa ny tsy fahaizana mitantana sy fanangaroana ny vola ampiasaina amin'ny asa sy ny vola ampiasaina personnel no mahatonga an'ilay fahasahiranana mamerimbola matetika.
Miasa tenany za ka rehefa maka vola dia oe hampandrosoana ny asa no angalana azy nefa rehefa tonga dia nanaovana trano, ny vola lany nanaovana trano, ny asa tsy miodina satria mila vola miasa nefa ny vola lany nanaovana trano, ny trano tsy vita dia eo amin'izay ny olana dia matetika zavatra ohatran'izany no olana fa tsy ratsy io raha mahay mitantana sy zavatra tena mandeha no angalana.
Za aloha zalà efa nahavita trano 2 nindrambola tamin'ny accès banque, tsy oe ny vola nindramiko no tena nahavitako azy manontolo fa nanampy io na dia nisy fotoana aza mafimafy ny mindrana.
Ho an'ny tompona sujet) ny accès banque manome na dia salarié ary ka. Tsy voatery miasa tenany fa manome zareo.